Ogbu mmiri miri emi nke nwere ike ibu ibu na radial na axial ibu, kwe ka onu ogugu di elu. Otutu uzo bọọlụ amị bụ ihe a na-apụghị ịkọwa. The anọkwasị miri uzo bọl amị bụ free nke mmezi na-eme ka ọ na Ọdịdị mfe.
A na-ejikarị agba agba agba iji kwado ngwakọta jikọtara ọnụ nke na-ebu radial ibu. Iko ha bụ ndịwa maka mfe kpọkọta. Mgbe arịọnụ na iji, radial nwechapụ na axial nwechapụ nwere ike gbanwee na preloaded arịọnụ nwere ike.
Akụrụngwa Soda Lime Glass, Borosilicate Glass
Ọkwa kachasị mma ： ± 0.02mm
Ngwa A na-ejikarị ya na microscopic plastic biarin, sprayers, senti karama, karama okpu, ịchọ mma ngwa, ụlọ ọrụ onunu, egweri media, wdg
Njupụta: 1.4g / cm3
Ọkwa: G0-G3 (0.01-0.05mm)
Njirimara: ọ dị ka naịlọn, mana ọ na-esikwu ike karịa naịlọn, ntakịrị njupụta karịa naịlọn. Ọ bụ ihe kachasị ike ma na-eyi ihe na-eguzogide ọgwụ.
Bọọlụ Nchara Chrome
Ihe akụrụngwa AISI1010 / AISI1015 / AISI1086
Ngwakọta a na-ebu agịga bụ ụdị ala pụrụ iche, nke nwere eriri na ogologo. The dayameta (D) nke a ala bụ ihe na-erughị 5mm, L / D bụ karịa 2.5 (L bụ ogologo nke ala). O yikwara agịga, ya mere a na-akpọ ya dị ka ntụtụ agịga
Ihe akụrụngwa AISI302 / 304 / 304L / 316 / 316L / AISI420 / 420C / 440C
The cylindrical ala agba bụ ụdị nke iche amị, mfe iji wụnye na ebukọtala. Ndị a biarin nwere elu amị ikike. Ọhụrụ Ọdịdị imewe nke Flange na ọgwụgwụ ihu nke ala ọ bụghị nanị na mma na axial amị ikike, kamakwa mma lubrication ọnọdụ nke na kọntaktị ebe n'etiti ala ọgwụgwụ ihu na Flange, na mma ọrụ arụmọrụ nke bearin
Aluminom na ngwongwo aluminom bụ ọla nke abụọ kachasị mkpa na ụlọ ọrụ mgbe ígwè, karịsịa ejiri na ụgbọelu, aerospace, ụlọ ọrụ ike na ihe ndị a na-enye kwa ụbọchị.
Ugboro abụọ Ahịrị Cylindrical ala agba, Brass Ball Lelee Valve, Cylindrical ala agba 20x47x14, Obere ọla kọpa, Cylindrical ala agba 25x52x15, Anọ ahịrị Cylindrical ala agba,